Dowladaha Kenya iyo Itoobiya oo ka wadahadlay xaalada amaanka ... | Universal Somali TV
Dowladaha Kenya iyo Itoobiya oo ka wadahadlay xaalada amaanka Soomaaliya
Dowladaha Kenya iyo Itoobiya ayaa ka wadahadlay dadaalada loogu jiro xasiloonida Soomaaliya kadib kulan ka dhacay magaalada caasimada ah ee Addis Ababa galinkii danbe ee Arbacadii Shalay.
Ra'isul wasaaraha Itoobiya Abiye Axmed ayaa kulanka la qaatay wasiirka arimaha gudaha iyo amniga Kenya Fred Matiang’i oo horkacayay wafdiga matalayay madaxweynaha dalkaas Uhuru Kenyatta.
Mr Fred Matiang’i ayaa ka hor inta uusan ka anbabixin caasimada Nairobi wuxuu u sheegay warbaahinta maxaliga ah in socdaalkiisa uu la xiriiro xaaladihii ugu danbeeyay ee Soomaaliya gaar ahaan dagaal ka dhacay xadka Kenya iyo Somaaliya todobaadkii hore, kaasi oo u dhaxeeyay ciidanka dowlada iyo kuwa Jubbaland ee ka soo duulay dhanka magaalada Mandera.
Xukuumada uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ayaa marar badan ku eedeysay dowlada Kenya in ay qeyb ka tahay amni darrada ka jirta dalka gaar ahaan Jubbaland, maadaama ay dabada ka riixeyso maleeshiyada wasiir Cabdirashiid Janan ee ku sugan gobolka waqooyi bari Kenya.
Ra'isul wasaaraha Itoobiya Abiye Axmed oo wada dhankiisa dadaalo loogu kala dabqaadayo labada wadan ayaa maalmo ka hor ku guuleystay in qadka taleefanka uu ku wadahadashiiyo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyatta si loo dajiyo xiisada labada Dhinac.
Wadahadalkaas kadib ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu aqbalay casuumaad kaga timid Uhuru Kenyatta, balse wuxuu shuruud adag ku xiray in Kenya marka hore ay Joojiso faragalinta ay ku heyso Soomaaliya.
Kan-xigaGanacsatada suuqa Xoolaha magaalada G...
Kan-horeMadaxweyne Erdogan oo ka digay dagaal...
52,000,929 unique visits